Tani ma Dhamaadkii Hillary Clinton? | Martech Zone
Tani ma Dhamaadkii Hillary Clinton?
Isniin, Maarso 19, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
In kasta oo aan jecelahay inaan naftayda uga fikiro sidii Libertarian, haddana waxaa laga yaabaa inuu igu dhex jiro wax yar Anarchist. Waan ku raaxeystaa dimuqraadiyeynta internetka iyo sidoo kale qiimaha tikniyoolajiyadda oo jaban. Labaduba waxay isku amaahiyaan inay awood siiyaan kuwa aan iibsan.
Xaaladda marka la eego waa tan dhawaanta ah ee Hillary Clinton ee xayaysiinta Apple 1984. Fiidiyowga waxaa la galiyay Youtube waxaana la daawaday in ka badan 300,000 oo jeer. Shakhsiyan, waxaan ka helay chuck ka mid ah. Ma ahi taageere Senetor Clinton, in kasta oo aan si buuxda u fahmay una qaddarin jiray hibada ninkeeda oo ah aftahan iyo siyaasi weyn.
Waxyaabaha la yaabka leh ee gurigan lagu sameeyay ayaa ah in muuqaal ahaan ay soo saaraan qabow aan dareemo mar kasta oo aan arko Senator Clinton oo hadlaya. Waxaan xiiseynayaa inta saameyn ee fiidiyoow sidan oo kale ah uu ku yeelan karo olole. Ma jiraan wax fiidiyowga ah oo tilmaamaya Hillary Clinton inay tahay dookh liita oo Madaxweyne… waa uun dareemo habkaas.
Kaliya maahan in qofna waqti ku qaato inuu tan sameeyo, ee wuxuu ahaa qof taageera Senator Obama. Fiidiyowga si fiican ayaa loo soo saaray, waxaanan qiyaasayaa, in aan wax kharash ah ku bixin laakiin aan ahayn waqti lagu horumariyo Tani ma dhammaadkii ololihii Hillary Clinton ee Madaxweynaha?
Waa tan xayeysiinta asalka ah ee Apple (oo la muujiyay xilligii Superbowl back ee maalinta):
Ma siyaasad xumadan baa? Muwaadin xumo? Masuuliyad darro ma tahay? Adduunyada muuqaalka dadweynuhu yahay wax walba oo siyaasiyiintuna ay ku bixiyaan malaayiin (ugu dhakhsaha badan balaayiin) si ay u riixaan sawirkaas, miyaanay ahayn wax lagu qoslo in tikniyoolajiyadda qof keliya gacmihiisa la geliyo ay ku wareejiso doorashada oo dhan?
Tani waa markay madadaalo hesho!
Runtii ma "Xikmaddii Dadka"?
Miyaad Dhiirrigelisaa Mise Dhiirrigelisaa Akhristayaashaada?
Mar 20, 2007 at 12: 19 AM
Aad baan uga shakisanahay xayeysiintan.
Qalabka dhawaaqa ayaa umuuqda inay gebi ahaanba ku qaldan yihiin xayeysiiska. Waxaan garwaaqsaday inay jirto been abuur asalka ah, oo juxtaposes "waanu ka adkaan doonaa" tuurista dubba. Laakiin asalka, codku wuxuu leeyahay tayo muuqata oo shar ah. Dhawaaqa dhawaaqaani waa isku dayga cad ee Hillary ee ah inay la kulanto sidii qof caadi ah, oo “wadahadal” la leh midkeen kasta shaqsi ahaan, halka xayeysiinta asalka ahi ka hadlayso “hal qof, hal doon, hal go’aan, hal sabab,” iyo “beer fikirka saafiga ah ee shaqaale kastaa ubaxdo, kana nabad galo cayayaanka fikradaha is burinaya. ” Dhanka kale, qaniinyada dhawaqa ee Hillary waxay leedahay "ma doonayo dadka ila raacsan." Sidoo kale, sawirka walaalkii weynaa waa mugdi, wuxuuna ku dhexjiraa darbiga mugdiga ah ee ganacsiga asalka ah, halka qiyaasta Clinton ay tahay mid cad oo dhalaalaya, oo ah aberration qolka monolithic
Haddii aan u malaysto ilaha fiidiyowgaan, waxaan sharad ku dhufan lahaa inuu ka yimid ololihii Clinton. Bal qiyaas arag adigoon aqoon u lahayn asalka. Dadka intiisa badani ma xasuustaan ​​asalka waxaas oo dhan si fiican. Halkan waxaa ku yaal fasiraad kale oo laga duubay fiidiyowga Clinton: Clinton waxay isku dayeysaa inay baraarujiso dadka u bartay siyaasad ahaan isboorti tartan ah, ama dagaal xisbiyeed, halkii laga hadli lahaa, fikradaha la is weydaarsado, ee ku saabsan sida qof walba looga dhigayo inuu ka roon yahay. Hillary waxay tiri waa runti wanaagsantahay ilaa iyo hada, kama aanan joojin hadalka. Si kastaba ha noqotee, xoogagga xun qaarkood ma rabaan inaad hadalka sii wadatid. Isla intaan dubbaha la tuurin, qoraalka shaashadda dul saaran Hillary ayaa leh, "kani waa wadahadalkeenna." Marka xigta ee aan shaashadda aragno, Hillary oo dhoola cadeyneysa ayaa markale tiri "waxay rajeyneysaa inay sii wadato wadahadalkan," wax yar un ka hor inta aan dubka dabku ku burburin shaashadda. Xayeysiinta asalka ah, ka dib qaraxii hore markii qorraxdu ku dhacdo shaashadda, waxaan maqalnaa nal, qabow qabow, oo soo jeedinaysa xorriyadda. Dhawaqan ayaa umuuqda mid laga gaabiyay fiidiyowga Clinton, isagoo hoos u dhigaya garoonka isla markaana soo jeedinaya qabowga qabow ee madhnaanta iyo rajo beelka. Markan qodobkan waxaan si dhab ah u la yaaban nahay yaa xumaan kara oo doonaya inuu joojiyo "wada hadalkayaga." Waxaan markaa aragnaa shaashad cad oo dhalaalaysa oo leh, “Janaayo 14-keeda, doorashada hordhaca ah ee Dimuqraadiga ah ayaa bilaabmi doonta. Waadna arki doontaa sababta 2008 uusan u noqon doonin sidii '1984'. ”Ogow in 1984 ay muhiimad ku leedahay siyaasadda madaxweynenimada marka laga reebo buugga Orwell. 1984 waxay ahayd sanadkii Walter Mondale, oo u ordayay sidii qof xor ah oo xor ah, lumiyay gobol kasta oo dalka ka tirsan marka laga reebo Minnesota. Shaashadda cad, oo la xiriirta Clinton, waxay ballan-qaadaysaa natiijo ka duwan tii 2008, illaa iyo inta laga daboolayo shaashad madow oo mug leh oo cinwaanka webka Barack Obama. Waa inuu noqdaa kan doonaya inuu joojiyo wadahadalka.
Mar 20, 2007 at 6: 45 AM
Waad ku mahadsan tahay faallooyinka dheer! Saxafiyiintu waxay isku dayayaan inay raadraac ku sameeyaan qofka dhabta ah ee ku soo geliyay tan YouTube - Waxaan xiiseynayaa inaan arko sidoo kale. Waxaan ka shakisanahay inay ahayd ololihii Clinton, in kastoo. Anigana sidoo kale waxaan ka shakisanahay inay ahayd ololihii Obama, wuxuu si aad ah u dhaleeceeyay xayeysiinta weerarka waana iska ilaaliyay ilaa iyo hadda Malahayga waa inuu ahaa taageere Obama oo waqti badan ku haysta gacmahooda iyo barnaamijyo wanaagsan oo wanaagsan.
Halkii aan xoogga saari lahaa siyaasadda, waxa aniga xiise ahaan ii ah suuq ahaan waxa ay tani ku samaynayso boqollaal milyan oo doollar oo dadkani ku bixin doonaan ololahooda. Ma ka hortagi doontaa weerarada? Xoojiso iyaga?
Hal shay oo aan isla markiiba ogaaday ayaa ahaa in xayeysiisyada John McCain ay ka soo baxayaan Google iyaga oo sheegaya Hillary Clinton. Waxay umuuqataa xerada McCain inay durba u aragto qiimaha xayeysiinta akhlaaqda!
Mar 20, 2007 at 1: 51 AM
"Tani ma dhammaadkii Hillary Clinton?"
Xaqiiqdii waan rajeyneynaa sidaas.
Mar 20, 2007 at 12: 21 PM
Waxaan gebi ahaanba ka maqanahay dhinac ka mid ah tan, laakiin maxaa "Xun" fiidiyaha. Kaliya waxay umuuqataa ereyo hadal siyaasadeed ah aniga. Ii sheeg.
Mar 20, 2007 at 3: 24 PM
Waa isbarbardhigga Madaxweynenimada Hillary Clinton iyo dawladdii kali-taliska ahayd ee 1984. Hadaadan akhrin 1984 waxaa qoray George Orwell, Waan ku talin lahaa. Waa deg deg akhris.
Xaqiiqdii maahan amaan.
Mar 20, 2007 at 3: 34 PM
ahhh, hada hel. In muddo ah oo aan weligii ku weynayn akhriska. Aad iyo aad ayaan u garanayaa
Mar 20, 2007 at 12: 24 PM
Fiidiyowga Hillary 1984 wuxuu ku socdaa qaab xad-dhaaf ah. Waxaa jira arrimo muhiim ah oo halkaa ka muhiimsan oo ka muhiimsan
xariif yar oo ololeyaal xayeysiis ah oo aan fariin dhab ah lahayn, gaar ahaan mid aan xitaa asal ahayn.
Mar 20, 2007 at 3: 28 PM
Qodobkaagu gabi ahaanba waa ansax. Nasiib darrose, codbixiyayaal badan ayaan u codeyn arrimaha dhabta ah, in kastoo. Waxaan u maleynayaa inay tahay mid ka mid ah khaladaadka jira ee casriga iyo aragtida casriga ah. Khalad ama sax, codbixiyayaal badan ayaa si fudud loo wareejiyaa.
Taasi waa sababta aan ugu maleynayo inay tani tahay dhacdo soo jiidasho leh. Waxay si fudud u tahay bilowgii wax badan oo soo socda. Waan ogahay fikradda ah saameynta ay ku yeelan karto cod-bixiyaasha weli - laakiin shaki kuma jiro inay jiri doonto mid.
Mar 20, 2007 at 8: 37 PM
Waxaan gabi ahaanba u fahmay oo aan ixtiraamay hibada ninkeeda oo aftahan ah
Mararka qaarkood arrimuhu waa wax lagu qoslo, xitaa marka aan loogu talagalin. Waxaan rajaynayaa inaad ka warqabto macnaha labanlaabka ah ee xukun kastaa helo oo ay kujiraan ereyada "Clinton" iyo "hadal" 🙂
Mar 26, 2007 at 2: 16 PM
Waa xayeysiin awood, gaar ahaan haddii aad taqaanid asalka (by Ridley Scott, waxaan u maleynayaa). Ma ahan dhamaadka Hilary maadaama ay jiraan arrimo kale oo muhiim ah oo qatar ku jira, laakiin waa xabad fiican halkaan. Ganacsiga ku saabsan ninka sameeyay ayaa umuuqda inuu ka weecinayo.
Mar 26, 2007 at 6: 18 PM
Waxaan maqlay in uu qandaraasle qandaraasle ka yahay shirkad waxoogaa u qabata Obama laakiin ilaa iyo hada waa la cayriyay. Taasi waa nasiib darro - runtii uma maleynayo inay jiraan wax xun oo ku saabsan xayeysiiska gabi ahaanba, in kasta oo ay xaqiiqdi jirto mowduuc ka badbadis ah! Waxaan u rajeynayaa ninka wanaag, runti waxay ahayd toogasho fiican.
Apr 7, 2007 at 2: 29 PM
Taasi waa waxa ugu yaabka badan ee aan abid arko.